Igumbi likaKumkanikazi, iMerrybell Motel kufutshane neCamden naseBelfast
Igumbi lakho lokulala e iflethi eqeshisayo sinombuki zindwendwe onguFraser & Zulilah
I-100% yeendwendwe zakutshanje inike uFraser & Zulilah iinkwenkwezi eziyi-5 kunxibelelwano.
Eli gumbi liyinxalenye yeMerrybell Motel. Kukho ibhedi enye yokumkanikazi egumbini elala abantu ababini ngokukhululeka.
Kuncanyathiselwe kwigumbi lokuhlambela labucala elineshawa, indlu yangasese kunye nesinki. Izinto eziluncedo ziquka ifriji, imicrowave, i-air-conditioning, iheater, itv yescreen esicaba esineDirecTV kunye ne-intanethi yefiber ekhawulezayo.
Ungayimisa imoto yakho phambi kwegumbi lakho. Ngoku sijonga iindwendwe zethu ngaphandle kwaye sikhathalela lonke ukucoca kunye nempahla ngokwethu.
Kukho isantya esiphezulu se-fiber intanethi ekhoyo kuyo yonke ipropathi. Ifanelekile kubahambi abafuna ukwenza umsebenzi othile ngelixa bekude nekhaya. Kwakhona kuhle xa ufuna ukusasaza umboniso owuthandayo ngaphandle kokulibazisa.
Ulwandle luhamba nje imizuzu emi-5 ukusuka kwindlwana. Siyakuthanda ukutsiba kwidokhi ngeentsuku ezishushu kumaza olwandle. Okanye ukuhambahamba kwiindonga zesanti kumaza aphantsi. Umzuzu nje omnye endleleni kukho isikhululo segesi, imarike enkulu egcweleyo kunye nevenkile yokutyela yepizza yeenkuni. Amachibi amaninzi kunye neentloko zomzila zonke zingaphakathi kwimizuzu elishumi yokuqhuba i-motel.
Idolophu yaseBelfast yimizuzu eli-10 yokuqhuba eMantla kwi-Rt 1. Idolophu yaseCamden yimizuzu eyi-15 ezantsi kwi-Rt 1. Zombini iBelfast kunye neCamden zibonelela ngeendawo zokutyela ezininzi ezimangalisayo, iimarike zamafama kunye neevenkile.
Umbuki zindwendwe ngu- Fraser & Zulilah
Sihlala kwipropathi kwaye sihlala sikufutshane xa kufuneka. Siyakonwabela ukujonga wena buqu kwaye sihlala sonwabile ukunika iingcebiso ngeendawo zokutya, eyona mingxunya yokuqubha kunye nokuhamba kunye neminye imisebenzi.
UFraser & Zulilah yi-Superhost
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Northport